Ulawulo lweZakhono zoLuntu - ITS Tech School
Ziziphi Izinto Zoluntu?
Ukuphuhliswa kweeNkqubo zeeNgqesho
Imbuyekezo kunye noLawulo lweeNzuzo
Ukulawula iMithetho Echaphazela Ukuqeshwa
Ukuqhelanisa nezixhobo zangaphandle
Fumana Uqeqesho lwaBantu
Cacisa inxalenye ye-HRM kwimibutho.
Umntu kwaye uhlolisise inxalenye yemisebenzi enkulu ye-HRM.
Ulawulo lwabasebenzi (HRM) yindlela yokusebenzisa abantu, ukulungiselela, ukuhlawulela, ukudala imigaqo-nkqubo ebonisa ukuba nabo, nokudala iinkqubo zokubamba. Njengentsimi, HRM has experienced numerous progressions throughout the most recent twenty years, giving it a considerably more critical part in the present organizations. Before, HRM implied handling finance, sending birthday presents to representatives, orchestrating organization trips, and ensuring shapes were rounded out accurately—at the end of the day, a greater amount of a managerial part as opposed to a vital part vital to the achievement of the association. Jack Welch, previous CEO of General Electric and management master, entireties up the new part of HRM: XCHARXEscape the gatherings and birthday events and enlistment frames.… Remember, HR is critical in great circumstances, HR is characterized in tough circumstancesXCHARX (Frasch, et. al., 2010).
Khumbula ukuba iinkalo ezininzi ze-HRM nazo zihamba ngezinye iintloko zeofisi, nto leyo eyenza le datha ibalulekile, naphezu kwendlela ebizwa ngayo. Uninzi lweengcali zidibanisa kwiindawo ezisixhenxe eziphambili ezidlala kwi-HRM kwimibutho. Ezi zichazwe kumacandelo ahambayo.
Ufuna abantu ukuba benze iimpazamo baze bazalise umsebenzi kumbutho. Enyanisweni, kwanamashishini anamhlanje, abantu bafuneka. Kule miqolo, enye yezinto ezibalulekileyo kwi-HRM kubasebenzi. Ukuqeshwa kwabasebenzi kubandakanya yonke inkqubo yokuthengiswa ekuboniseni umsebenzi ekuhleleni umthwalo wembuyekezo. Ngaphakathi kwamandla abasebenzi, kukho intuthuko emine ebalulekileyo:
Ukuphuculwa kwesicwangciso sobasebenzi. Eli lungiselelo lenza i-HRM ibone ukuba yeyiphi inani labantu kufuneka baqeshe ngenxa yeminqweno yengeniso.
Ukuphuculwa kwemigaqo-nkqubo yokukhuthaza i-multiculturalism emsebenzini. I-Multiculturalism kwindawo yokusebenzela iphela ngokugqithiseleyo, njengoko sinabantu abaninzi abaninzi abavela kwisiseko seziseko zabasebenzi.
Ukubhalisa. Oku kubandakanya ukufumanisa abantu ukuba bazalise izikhundla ezivulekileyo.
Ukuzimisela. Kule nqanaba, abantu baya kudibana kunye nokukhethwa, kwaye umthwalo ofanelekileyo wohlawulelo uya kulungiswa. Le nkqubela ilandelwa ngokulungiselela, ukugcinwa kunye nokuphefumlelwa.
Iingcali ze-HRM zifuna ukuqinisekisa ukuba umvuzo uqikelele, udibanisa i-gauge ye-industry, kwaye uphezulu ngokwaneleyo ukukhwela abantu ukuba basebenze umbutho. Umvuzo uquka nantoni na into eyenziwa ngumsebenzi kumsebenzi wakhe. Ukongezelela, iingcali ze-HRM zifuna ukuqinisekisa ukuba imbuyekezo iyafana nantoni na into eyenziwa ngabanye abantu abenza imisebenzi efana nokuhlawulwa. Oku kubandakanya ukubeka izikhokelo zokuhlawula ezicinga ubungakanani beminyaka kunye nombutho, iminyaka yamava, imfundo kunye nokujonga okuthelekisayo. Iziganeko zomvuzo womsebenzi zibandakanya ezi zilandelayo:
I-401 (k) (ukuyila umhlalaphantsi)
Isitoko zithenga iimveliso
Ukuhlawula iindleko zemfundo
Isondlo siquka ukugcina nokukhupha abasebenzi ukuba bahlale kunye nombutho. Umvuzo luqwalasela ngokusisiseko kwisondlo sokumela, nangona kunjalo kukho izinto ezahlukeneyo. I-90% yabasebenzi bayishiya umbutho ngezizathu ezihamba kunye nazo:
Imiba ejikeleze umsebenzi abawenzayo
Iingxaki kunye nabaphathi abaziintloko
Ulungelelaniso olungafanelekanga ngeenkcubeko zenkcubeko
Isimo semeko esingafanelekanga yomsebenzi
Xa sitshale amandla ukuba senze abamele abatsha, kufuneka siqinisekise ukuba balungele ukwenza lo msebenzi kwaye baqhubeke nokuphuhlisa kwaye bakhule iziphumo ezintsha kumsebenzi wabo. Ezi ziphumo ekusebenzeni okuphezulu kumbutho. Ukulungiswa ukongeza kwinqanaba eliphambili ekuphefumleleni kwabasebenzi. Abameli abavakalelwa kukuba bayakha izikhono zabo banomdla wokuba banelisekile kwimisebenzi yabo, ekhokelela ngokulondolozwa kwabasebenzi. Iimeko zokulungiselela iiprojekthi zingabandakanya ezi zilandelayo:
Iingqesho zokulungiselela, umzekelo, indlela yokuqhuba inkqubo ethile yePC
Ukulungiswa kunye nokulungiswa ngokusemthethweni, umzekelo, ukuziphatha okungalunganga ukulungiselela nokuziphatha okulungiselelayo
Abantu beempahla kufuneka bazi malunga nganye yemithetho echaphazela indawo yokusebenzela. Ingcali ye-HRM ingasebenza kunye neminye yale mithetho:
Ukuhlawulwa kwemfuneko, umzekelo, umvuzo ophantsi kakhulu ovunyelwe ngumthetho
Imithetho yokhuseleko yabasebenzi
Isimo esisemthethweni sakwa-HRM siyaqhubeka sitshintsha, ngoko i-HRM kufuneka ikwazi ngokuphathelele utshintsho olwenzekayo kwaye emva koko ludlulisela ukuqhubela phambili kulo lonke ulawulo lombutho. Ngokuchasene nokuzisa inxalenye ephambili kwimithetho ye-HRM, siya kujongana nale mithetho kwicandelo ngalinye elibalulekileyo.
Ngaphandle kwezi nxalenye zangempela, ubuchule obukhulu bokuxhatshazwa kunye nokulawula okumangalisayo kubaluleke kakhulu ekulawuleni ulawulo lwabasebenzi kunye nokongezwa kolawulo jikelele.
Nangaphandle kokujongana neengongoma, umlawuli we-HR kufuneka acinge ngamagunya angaphandle ekudlalweni anokuchaphazela umbutho. Amandla angaphandle, okanye iinguqu ezingaphandle, zizinto ezo inhlangano engenazo ukulawula ngokukhawuleza; nangayiphi na imeko, zinokuba zizinto ezinokugxininisa okanye zithintele izibonelelo zabasebenzi. Iziphumo ezingaphandle zingabandakanya ezi zilandelayo:
Ukudityaniswa kwehlabathi kunye nokugxotha
Utshintsho kumthetho wezoshishino
Iindleko zonyango lweenkonzo
Iindidi ezintle zabasebenzi
Ukutshintsha i-socioeconomics yabasebenzi
Bonke abasebenzi basebenza ngokugqithiseleyo
Izinto ezisetyenziswayo, umzekelo, iinkcukacha ze-HR
Ukusetyenziswa okubanzi kwenkqubo enxibelelwano engaqhelekanga ukuhanjiswa kwedatha kubasebenzi
Amagumbi okuQeqesha kwiRitela eGurgaon